Xarunta baadi qabadka xoolaha dowladda Hoose ee Xamar oo la dhagax dhigay “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xarunta baadi qabadka xoolaha dowladda Hoose ee Xamar oo la dhagax dhigay “SAWIRRO”
Guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka Gobolka Banaadir Cabdicasiis Cilmi Cali Xalane oo ay wehliyaan xubno ka tirsan maamulka ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha xaruunta baadi qabadka xoolaha Dowlada Hoose Xamar, taasi oo loogu talagalay in lagu xanaaneeyo xoolaha dhex wareegaya caasimadda, si ay u hagaagto bilicda magaalada.
Taliyaha ciidanka Ilaalada deeganka Xamar Axmed Xuseen Mahdi ayaa sheegay in xaruntan ay ahaan jirtay goobta lagu xanaaneeyo xoolaha baadida ah ee magaalada dhex wareegaya, isla markaana ay diyaar u yihiin marka la dhameeyo dhismaheeda ay xoolaha ku xareyn doonaan.
“Waa xaruntii baadi qabadka xoolaha nool ee duurka wareegaya, gaar ahaan kuwa magaalada dhex maraya, waxaana loogu talagalay in lagu xanaaneeyo xoolaha, si loo ilaaliyo bilicda caasimadda” ayuu yiri Taliyaha ciidanka Ilaalada deegaanka Xamar.
Agaasimaha xiriirka degmooyinka Gobolka Banaadir Muqtaar Maxamed Axmed “Dhagacadde” ayaa sheegay in barnaamijkan uu qeyb ka yahay mashruuca dhiso dalkaaga, shacabkana looga baahanyahay in ay u istaagaan sidii ay uga qeyb qaadan lahaayeen dib u dhiska xarumaha danta guud ee dalka.
Guddoomiyaha Degmada Kaaraan Axmed Xasan Yalaxow ayaa sheegay in bulshada ku dhaqan degmada ay soo dhaweynayaan, isla markaana ay diyaar u yihiin la shaqeynta dadka ku shaqada leh.
Guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee Gobolka Banaadir Cabdicasiis Cilmi Cabdi Xalane ayaa sheegay in dhismaha xarunta uu qeyb ka yahay dhiso dalkaaga, waxaana uu baaq u jeediyay ganacsatada iyo shacabka inay ka qeyb qaataan dhismaha xaruntan.
“Dhismaha marka uu dhamaado kaddib, muddo ayaa loo qaban doonaa dadka xoolaha ku dhaqda caasimadda, iyadoo xoolihii iyaga oo magaalada iska wareegaya lagu dhex arka, lagu xareyn doono xarunta, isla markaana uu ganaax muteysan doono cidda iska leh, mudadaasi ganaaxa haddii uu bixin waayo lacagta lagu ganaaxay, xoolaha waxaa lagu wareejin doonaa xabsiga dhexe ee Xamar, si maxaabiista loogu qalo” ayuu yiri Guddoomiye ku-xigeenka.
Aqoon kororsi loo furay shaqaale ka tirsan xafiiska xisaabiyaha guud ee Qaranka “SAWIRRO”